दशैंँको टिकट बुकिङ असोज १५ देखि खुल्ने, भाडा दोब्बर लाग्ने ! - नेपालबहस
दशैंँको टिकट बुकिङ असोज १५ देखि खुल्ने, भाडा दोब्बर लाग्ने !
| १७:१७:४९ मा प्रकाशित
३० भदौ, काठमाडौं । दशैंँमा घर जानेले असोज १५ देखि टिकट लिन पाउने भएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले असोज १५ देखि दशैँ विशेष लामो दुरीका गाडीको अग्रिम टिकट बुकिङ खुला गर्ने तयारी गरेको हो ।
विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले दसैँलाई लक्षित गरी १५ असोजबाट टिकट बिक्री वितरण खुला गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् । टिकट बसपार्कमा भन्दा अनलाईनबाटै काट्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताएका छन् ।
तर भाडादर भने दोब्बर हुने भएको छ । धेरै यात्रुको चाप हुने भएकाले गाडी भाडा ५० प्रतिशतले बढाउने तयारी भइरहेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन र जोगाउनका लागि एक सीटमा एक जना मात्रै यात्रु राख्ने गरी दोब्बर भाडा बढाउन लागिएको हमालले बताए ।
हरेक बर्ष दशैंँका लागि २५ लाख मानिसले काठमाडौं छाड्ने गरेका छन् । तर यस बर्ष धेरै जना पहिले नै गाउँ गएकाले आधा मात्रै काठमाडौँबाट बाहिर जाने सम्भावना छ ।
‘कौसी क्विन फोटो प्रतियोगिता’ हुने ९ मिनेट पहिले
साढे १७ अर्बको शहरी पूर्वाधार परियोजना विश्व बैंकबाट स्वीकृत १२ मिनेट पहिले
थपिए १५१३ संक्रमित, ७३१ जना डिस्चार्ज ४३ मिनेट पहिले
ओली प्रचण्डको भेटवार्ता निष्कर्षविहिन ४९ मिनेट पहिले
वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्न नगरवासीलाई अपिल ५७ मिनेट पहिले
आज ट्रम्प र बाइडेनबीच पहिलो बहस हुँदै ९ घण्टा पहिले